Porto Rico: Vonona ho amin’ilay fitokonana nasionaly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2009 5:10 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, македонски, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Deutsch, English
Eo am-piomanana amin'ny fitokonana nasionaly hatao amin'ny Alakamisy 15 Oktobra i Porto Rico. Nanomboka tamin'ny nandroahan'ny governora Luis Fortuño mpiasan'ny governemanta tokony ho 17 000 teo ny herinandro voalohan'ny Oktobra, dia nisy fanentanana goavana avy amin'ireo sehatra samihafa amin'ny fiaraha-monina sivily: mpiasa sy mpikambana amina sendika, vehivavy, mpandàla ny tontolo iainana, mpianatra, ary profesora, sy ny sisa. Nisy fanehoan-kevitra sy hetsika maneho tsy fankatoavan'ny sivily mba hanoherana ireo politika ara-toekarena nolazain'ny governemanta fa ilaina noho ny krizy ara-bola. Raha atambatra ny amin'ity taona ity, efa nandroaka teo amin'ny mpiasam-panjakana 25 000 teo ilay governemanta voafidy farany teo io.
Tato anatin'ny volana vitsivitsy izao dia mitombo ny disadisa eo amin'ny governemanta sy ireo vondrom-piaraha-monina sivily samihafa: baiko fandroahana any amin'ireo fiaraha-monina sahirana ara-tsosialy sy toekarena, herisetran'ny manam-pahefana, ary ny fandravana ireo fandraisana andraikitra ara-piaraha-monina tahaka ilay Fideicomiso del Caño Martín Peña. Nanampy trotraka izany koa ny karazana kabary ofisialy nataon'ny governemanta izay voasokajy ho manafintohina sy feno faharatsiam-panahy, toy ilay fiteny mampalahelo malaza amin'izao fotoana izao hoe “fiainana izany”, ary vao haingana, tamin'ny fampitoviana ireo mpanao fihetsiketsehana amin'ny mpampihorohoro, nataon'i Marcos Rodríguez Ema, Chief of Staff notendren'ny governora. Izay no fototry ny fitokonana nasionaly amin'ny Alakamisy. Ho valin'izany kabary izany, i Tito Otero dia namoaka horonantsary mampiseho ankizilahy kely mitendry lokanga manoloana ny Kongresy. Toy izao no rentsika lazain'ilay ankizilahy: “Tsy mpampihorohoro aho. Mino ny fahamarinana ho an'ny fireneko aho.”
Eo am-piomanana amin'ilay fitokonana izay mikendry ny hampikatso ny firenena mandritry ny andro iray ireo mpitoraka blaogy sy mpampiasa twitter. Ao amin'ny Cargas and descargas [ES] Edwin Vázquez dia niantso ireo mpitoraka blaogy sy olon-tsotra mba hampiasa Twitter sy Facebook hampitàna vaovao amin'ny andron'ilay fitokonana. Efa manontany ireo mpamaky azy sahady ny olon'ny @caribnews momba ireo soso-kevitra amin'ny ‘hashtag’, ary efa nanomboka ny resaka tao amin'ny #twittericans.